News Collection: रेखाले ठोकिन शतक
रेखाले ठोकिन शतक
रेखा थापा बद्नाम छिन्, त्यसैले हिट पनि छिन्। छोटो पहिरन लगाउँछिन्, त्यसैले उनलाई व्यङ्ग्यकारहरू देखा थापा भन्छन्। धेरैपटक चर्चित हिरोलाई उनले चलचित्रबाट निकालेर आफ्नो बाहुबल देखाइसकेकी छिन्। १२ वर्षअघि चलचित्र 'हिरो'मा अभिनय गर्दै यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा १० कक्षा पढ्ने चञ्चले एवं अबोध रेखा अहिले राजनीति गर्नेसम्मको महत्वकांक्षा पाल्न थालेकी छिन्। उनीसँगै चलचित्रमा प्रवेश गरेका चर्चित नायिकाहरु लाखापाखा लागिसकेका छन्। विवाहित रेखा भने चलचित्रमा जमेकी मात्र होइनन्, लगातार हिट चलचित्र दिइरहेकी छिन्। यतिखेर उनको सयौं चलचित्र प्रदर्शनको तयारीमा छ भने श्रीमान्सँगको खट्पटले बजार तातेको छ। रेखा भन्छिन्—
म यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नेपाली चलचित्रको कथामा नायिकाहरू गौण थिएँ, अहिले उनीहरू महत्वपूर्ण पात्रका रूपमा विकसित भएकाले आफ्नो भूमिका पनि बढिरहेको महसुस गर्छु।
कतिले रेखालाई उडाउन खोजे, तर्साउन खोजे, डिमोरलाइज गरे तर, म टसको मस भइन्। म अङ्ग प्रदर्शनकै कारण जमे भन्ने कुराचाहिँ अज्ञानीले गर्ने कमेन्ट हो। मैले अहिलेसम्म कतै अश्लील दृश्य दिएको छैन, न त कसैलाई टङ किस नै गरेको छु।
नेपाली दर्शक त्यति मूर्ख छैनन्, जति उनीहरूलाई सोचिन्छ।
म अलिकति इगोइस्ट छु। मलाई कसैले अपहेलना गरेको मन पर्दैन। जसले जस्तो व्यवहार गर्‍यो, त्यसको त्यस्तै जवाफ दिन्छु। निखिल उप्रे तीको के कुरा गर्नु ? जसको घरमा दुई श्रीमती छन्, दर्जनौं समस्या छन्, उसको बाहिर समस्या हुनु ठूलो कुरा होइन।
जुन दिन मलाई लाग्छ, अब सम्बन्ध बढाउन सकिन्न, त्यही दिन म सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गर्छु। मन मिल्दैन भने एकै ठाउँमा बसेर अर्थ पनि छैन।
रेखा थापा आमा बन्ने भएपछि रेखाले नै त्यसको निर्धारण गर्छे, अरूले गर्ने होइन। दुःख गरेर आमा बन्ने म, थर श्रीमान्को ? यो त सोह्रै आना अन्याय हो। मज्जाले पिउने भन्ने कुरा पनि हल्लै हो। एक-दुई गिलास पिउँथे। कहिलेकाहीँ मस्तीको मुडमा दुई चार सर्को चुरोटचाहिँ तान्छु।
रेखा थापा बद्नाम छिन्, त्यसैले हिट पनि छिन्। छोटो पहिरन लगाउँछिन्, त्यसैले उनलाई व्यङ्ग्यकारहरू देखा थापा भन्छन्। धेरैपटक चर्चित हिरोलाई उनले चलचित्रबाट निकालेर आफ्नो बाहुबल देखाइसकेकी छिन्। कहिले प्रचण्डसँग नाचेर, कहिले धार्मिक आस्थामा खलल पुग्ने गरी बस्त्र लगाएर रेखाले परम्परावादीहरुलाई झड्का दिइसकेकी छिन्। १२ वर्षअघि चलचित्र हिरोमा अभिनय गर्दै यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा १० कक्षा पढ्ने चञ्चले एवं अबोध रेखा अहिले राजनीति गर्नेसम्मको महत्वकांक्षा पाल्न थालेकी छिन्। उनीसँगै चलचित्रमा प्रवेश गरेका चर्चित नायिका बिपना थापा, सज्जा मैनाली, जल शाह, निरुता सिंह लाखापाखा लागिसकेका छन्। विवाहित रेखा भने चलचित्रमा जमेकी मात्र होइनन्, लगातार हिट चलचित्र दिइरहेकी छिन्। यतिखेर उनको सयौं चलचित्र 'रावण' प्रदर्शनको तयारीमा छ भने श्रीमान्सँगको खट्पटले बजार ताते को छ। सधैं हलुका मसला बनाइने रेखा थापाले यसपटक साप्ताहिकका अश्विनी कोइरालासँग भनिन्, 'म बजारमा सस्तो प्रचार मात्र भएँ, अलिकति गम्भीर कुरा गरौं है।'
तपाईंको सयौं चलचित्र 'रावण'प्रदर्शनको तयारीमा छ, मैले सय वटा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेंभन्दा कस्तो लाग्छ ?
राजेश हमालसँग १२ वर्षअघि पहिलो फिल्म खेल्दा म नयाँ कलाकार थिएँ। त्यसबेला मलाई उहाँजस्तो अनुभवीले सहयोग गर्नुपथ्र्याे। सहयोगको त परको कुरा उहाँले मसँग तस्बिर खिच्न पनि मान्नुभएन। त्यो उहाँको घमन्ड थियो। पछि जव म हिट भएँ, उहाँले मसँग तस्बिर खिच्ने इच्छा राख्नुभयो, मैले अस्वीकार गरिदिएँ। मैले रिसले त्यसो गरेकी थिइनँ, उहाँलाई थाहा होस्, राजेश हमालले पनि गल्ती गर्न सक्छ। बस त्यही घटना बजारमा स्क्यान्डलका रूपमा आएको हो। निखिल उप्रेतीको के कुरा गर्नु ? जसको घरमा दुई श्रीमती छन्, दर्जनौं समस्या छन्, उसको बाहिर समस्या हुनु ठूलो कुरा होइन। यसमा म दोषी छैन। विराज भट्टलाई मैले इन्डस्ट्रीमा ल्याएकी हुँ। सिनियरको अलिकति इज्जत त गर्नैपर्छ नि, त्यो नभएपछि मैले अलिकति रियाक्ट गरेकी हुँ।
म छविभन्दा २० वर्षले कान्छी छु। मैले उहाँको उमेर बाँचेकी छैन, त्यो उमेरका समस्या र अप्ठयारा बुझ्न सक्दिनँ तर उहाँले त मेरो उमेर पार गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई मेरो उमेरका अप्ठारा र समस्या थाहा हुनुपर्ने हो। त्यसलाई नबुझिदिँदा अलिकति प्रोब्लम हुन्छ। यद्यपि उहाँले मलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। एकजना कलाकारका लागि यो ठूलो कुरा हो। जहाँसम्म सम्बन्धविच्छेदको हल्ला छ, जुन दिन मलाई लाग्छ, अब सम्बन्ध बढाउन सकिन्न, त्यही दिन म तपाईंलाई नै बोलाएर सम्बन्धविच्छेदको घोषणा गर्छु। मन मिल्दैन भने एकै ठाउँमा बस्नुको अर्थ पनि छैन। जे होस्, दुई जनाबीच मन नमिलिरहेको कुराचाहिँ सत्य हो, हगि ?